कहिले नउदाउने गरी साउदीमै अस्ताए कर्ण बहादुर — News of The World
कहिले नउदाउने गरी साउदीमै अस्ताए कर्ण बहादुर
तेज थापा, साउदी अरब भाद्र १८, २०७५
साउदी अरब । देशमा बढ्दो बेरोजगारका कारण नेपालबाट लाखौं युवाहरू दिनानु विदेश पलायन भइरहेका छन् । सुन्दर भविष्यको सपना साँचेर प्रवास पलायन हुने सबैको सपना साकार नहुने रहेछ ।
स्वदेश मै परिवारसँग रमाइ वस्ने चाहना कस्लाइ पो हुदैन र ! वाध्यता र विवशताको जातो मुनि पिधिएका नेपाली यूवाहरूको जोश, जागर, रगत र पसिना बिदेशी भूमिमा वगिरहेको त छदैछ । त्यसमा पनि ति मध्य कहिले स्वदेश नफर्कने गरि उतै अस्ताएका थुप्रै दुःखद समाचारहरु छन् ।
विभिन्न देशबाट पैसासँग साटिएका धेरै नेपाली कामदारहरूको लास काठको वाकसमा बन्द भएर नेपाल फर्कने गरेका छन् । यस्तै घटनाका वास्तविक पात्र हुन् ४६ बर्षिय कर्ण बहादुर कार्की ।
उदयपुर जिल्ला त्रियुगानगरपालिका वार्ड न ११ शिबालय टोल स्थायी घर भएका कर्ण बहादुर र्काी छोराछोरीक सुनौलो भविष्यको परिकल्पना सहित लामो समयदेखि साउदीमा श्रम बेचिरहेका थिए । तर, विडम्वना नियतिले उनको सारा सपना चकनाचुर पारीदिएको छ । दिनभरको काम सकि साझ पसलबाट सर–सामान किनि कोठामा फर्कदै गर्दा चल्ति गाडिको ठक्कर दिदा उनको घटनास्थल मै मृत्यु भएको छ ।
जिजान मै अर्को कम्पनिमा कार्यरत टेक नारायण श्रेष्ठबाट घटनाको जानकारी प्राप्त हुनसाथ मेलमिलाप प्रबासिय संघका अध्यक्ष लिला (बिचरी) बहादुर बुढाथोकी तत्काल दुर्घटनास्थल पुगेका थिए । बिचारीले दिएको जानकारी अनुसार मृतक कार्कीलाइ रोड क्रश गर्दै गर्दा बिहिबार साँझ ७स्३० बजे साउदी नागरिकको गाडिले ठक्कर दिएको थियो । बुढाथोकी थप जानकारी हासिल गर्न सनिबार मृतक कार्कीको रोजगारदाता कम्पनिमा पुगेका थिए ।
कम्पनिले क्षतिपूर्ति सहित मृतक कार्कीको शब नेपाल फर्काउने आश्वान दिएको छ । आइतबारदेखि पक्रिया अघि बढेको र ठक्कर दिने साउदी नागरिक र निजको गाडी समेत स्थानिय प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको बुढाथोकीले संसारन्युजलाई जानकारी दिएका छन् ।
साउदी अरबको जिजान स्थित अल्हाद्र्द बथान नजिकै आहामद याहया खुबरानी बल्दियामा काम गर्दै गरेका मृतक कार्किको शब अहिले जिजान नजिकैको आर्दह हस्पिटलमा राखिएको छ । उनको परिवामा श्रीमति सहित ३ छोरी सहित १ छोरा छन् ।
युरोप शेर्पा संघमा दावा गेल्जेन शेर्पा
हिमाल चढ्न लागेका पूर्जाका लागि एनआरएनए यूकेले जुटायो १४ लाख
अनेस मकाउद्धारा विचल्लीमा परेका विद्यार्थीको उद्धार गर्न माग
अनेसासको सल्लाहकारमा डा. दुर्गा दाहाल
साउदीको जेद्दामा ६९ औ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस मनाइयो